शेरबहादुर–उषाकला, रघुवीर–जुलीकुमारी दम्पत्ति केन्द्रीय सदस्य
नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा केही दम्पत्ति परेका छन् । अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीले आइतवार मध्यरातमा केन्द्रीय सदस्यको सूची प्रस्ताव गरेका हुन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङ खुल्लातर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् । उषाकला राई प्रदेश १ को भूगोलबाट महिलातर्फ सदस्य बनेकी हुन् । तामाङ र राई दम्पत्ति हुन् । यस्तै रघुवीर महासेठ खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्य बनेका छन भने जुली महतो प्रदेश २ को महिला कोटामा केन्द्रीय सदस्य बनेकी छन् । महासेठ र महतो पनि दम्पत्ति हुन् । पदाधिकारीको सूची भ...
माधवकुमार गुट छोडेर ओलीतिर लाग्दा शेरबहादुर पनि पुरस्कृत
काठमाडौं : माधवकुमार नेपाल समूहमा सक्रिय रहेको नेकपा एमालेको एक जोडी नै पुरस्कृत भएको छ। आज बसेको बालुवाटार बैठकले शेरबहादुर तामाङलाई नेकपा एमालेको कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। तामाङ आफैँले जिम्मेवारी पाएको जानकारी गराए। शेरबहादुर तामाङ र उनकी पत्नी उषाकला राई दुवैजना पहिले माधवकुमार नेपाल समूहमा सक्रिय थिए। पछि दुवै…
ओली समूहमै फर्किए शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राई : RajdhaniDaily.com - ओली समूहमै फर्किए शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राई
शेरबहादुर दम्पती, दुई महिनामै ओली पक्षमा फर्किए
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व-मन्त्री शेरबहादुर तामाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमै फर्किएका छन्। दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओली पक्षबाट प्रचण्ड–माधव पक्षतर्फ लागेका नेता तामाङ ओली पक्षमै फर्किएका हुन्। उनीसँग उनको श्रीमती तथा प्रदेशसभा सदस्य उषाकला राई पनि ओली पक्षमै फर्किएकी छन्। ओली पक्षमै रहेका उनको दम्पती दुई महिनाअघि मात्रै ओली पक्षसँग असन्तुष्टि... The post शेरबहादुर दम्पती, दुई महिनामै ओली पक्षमा फर्किए appeared first on Purbeli News.
ओली समूहमै फर्किए शेरबहादुर र उषाकला
न्यज अफ नेपाल, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङ र उनकी पत्नी तथा नेतृ उषाकला राई फेरि नेकपा ओली समूहमै फर्किएका छन् । संसद विघटन भएसँगै तामाङ दम्पति नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समुहमा गएका थिए । तर, सो समूहमा सही व्यवस्थापन हुुन नसक्ने देखेर आफूूहरु फेरि ओली समूहमा फर्किएको तामाङ दम्पतीले जनाएका छन् । […]
पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राई ओली समूहमा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ र प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्य उषाकला राई प्रचण्ड–नेपाल समूह छोडेर ओली समूहमा खुलेका छन्
शेरबहादुर तामाङ र उनकी श्रीमती उषाकला राई प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा फर्किए
काठमाडौँ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता शेरबहादुर तामाङ पुनः प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा फर्किएका छन् । पार्टीले फुटको औपचारिकता मात्र पूरा गर्न बाँकी छँदा उनी पुनः प्रचण्ड–नेपाल कित्तामा उभिएका हुन् ।